The Bernedoodle နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိသင့်သောအရာများ - Breeds
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဒီဇိုင်နာခွေး ကျောက်တံတား နှင့် Morkies မြင့်တက်နေကြသည်, ဒါပေမယ့်ခွေးတစ်ကောင်ကမ်ဘာပျေါတှငျလူကြိုက်များအထိ၎င်း၏လမ်း pawing သောအသစ်တစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုခင်ဗျားတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ခွေးတစ်ကောင်အကြောင်းပြောပြပါရစေ .ရာဝတီ ။ ဒီဟိုက်ဘရစ်နှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များ၊ ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်၊ အသွင်အပြင်နှင့်စိတ်ထားတို့ကိုလေ့လာရန်ဆက်လက်ဖတ်ပါ။
အဆိုပါ Bernedoodle ၏အကျဉ်းချုပ်သမိုင်း
မိသားစုများအတွက်တစ် ဦး ကအပျော်အပျက်, ဖော်ရွေခွေး
Bernedoodle စောင့်ရှောက်မှု 101
အဘယ်ကြောင့် Bernedoodles ရွေးချယ်?
၎င်းသည်အသစ်သောမျိုးဆက်သစ်ဖြစ်သောကြောင့် Bernedoodles နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်မှာအကန့်အသတ်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်း၏နောက်ခံနှင့်မည်သည့်မျိုးရိုးမှဆင်းသက်လာသည်ကိုနားလည်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားဤခွေးအားပိုမိုသိကျွမ်းလာရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ရှယ်ရီ Rupke Swissridge Kennels မှ Poodles နှင့် Bernese Mountain Dogs ကိုပထမဆုံးစတင်ဖောက်လုပ်သူဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Rupke ပထမ ဦး ဆုံးအတွက်သန့်စင်ဖြတ်ကျော်ကြိုးစားခဲ့သည် 2003 , Bernese Mountain ခွေး၏ချိုမြိန်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ထောက်လှမ်းရေးနှင့် Poodle ၏နိမ့်သုတ်အင်္ကျီနှင့်အတူခွေးထုတ်လုပ်ချင်တယ်။
ထို့အပြင် Bernese Mountain Poo၊ Bernesepoo, Bernesedoodle, သို့မဟုတ် Bernepoo ဟုလည်းလူသိများသော, Bernedoodle သည်၎င်း၏မိဘများထံမှထိုစရိုက်များထက်များစွာပိုရသည်။ ဤ Doodles အမွေဆက်ခံနိုင်သည့်အခြားအရာများကိုရှာဖွေရန်မိဘတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်တွေ့ဆုံကြစို့။
လူတွေကဒါဝိသေသလက္ခဏာများကိုခစျြပုံလိုပဲ ရွှေ retrievers ရောနှောဝတ်ရည်မှဆောင်ခဲ့, တူညီတဲ့အဘို့အသွားသည် Bernese တောင်ခွေး သို့မဟုတ်ဘာနာ ( Bernese တောင်ခွေး ဂျာမန်ထဲတွင်) ။
ဤရွေ့ကားနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကုမ္ပဏီကြီးမကြာခဏသူတို့မျှဝေပါ ပျော့, ပျော်စရာ - ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်နှင့်အတူကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။
ဆွစ်တောင်တန်းများရှိလယ်ယာခွေးများအဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမွေးမြူခဲ့ပြီးဘာဂါသည်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ရာယင်းကိုမည်သို့ရှင်းပြသည် အားကောင်းတဲ့နှင့်အစွမ်းထက် သူတို့က။ သူတို့သည် ၂၈ လက်မ (၇၁ စင်တီမီတာ) အထိကြီးထွားနိုင်ပြီးအလေးချိန် ၁၁၅ ပေါင် (၅၂ ကီလိုဂရမ်) အထိကြီးထွားနိုင်သည်။
ခြေရာခံခြင်း၊ ထိန်းကျောင်းခြင်းနှင့်သွက်လက်ခြင်းတို့တွင်ထူးကဲသည်အပြင် Bernese Mountain Dog သည်၎င်း၏မိသားစုနှင့်လုံး ၀ ဆက်ကပ်အပ်နှံထားခြင်းဖြစ်သည် အလွန်သစ္စာစောင့်သိ ။
သက်တမ်း ၇ နှစ်ရှိပြီး Berner သည်တစ်သက်တာသက်တမ်းရှိသည် အတော်လေးသက်တမ်းတို ဖောက်။ သို့သော်သူ၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဤခွေးသည်သူ၏လူသားများစိတ်ကျေနပ်စေရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဂရုစိုက်မှုအားလုံးကိုစုပ်ယူလိမ့်မည်။
လူတိုင်းသိတယ် ခူး ခွေးတစ်ကောင်ကိုထောက်လှမ်းရေးစကေးအပေါ်မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းနှင့်သူတို့တစ်တွေရှိသည်သော Non- သွန်းလောင်းအင်္ကျီကိုအနိမ့် ။ ဤရွေ့ကားသူတို့ crossbreeding များအတွက်လူကြိုက်များရွေးချယ်မှုနေသောအဓိကအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
သော်လည်းထက် Poodle ဖို့ပိုရှိပါတယ်။ ၎င်း၏ classy အသွင်အပြင်နောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါတယ် တစ် ဦး Hardy, မကြောက်တရားခွေး သောရေ retriever အဖြစ်အစပြု။
Poodles လည်းဖြစ်ကြသည် ပျြောရှငျနှင့်ပျော်စရာ - မေတ္တာရှင် အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်၊ သူတို့သည်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများစွာရရှိနိုင်သောတက်ကြွသောအိမ်ထောင်စုတွင်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးသည်။
မျိုးဆက်များသည်ဤစမတ်ခွေးများကိုအခြားမျိုးဆက်များနှင့်ဖြတ်ကူးခြင်းကိုနှစ်သက်သောနောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်မှာ Poodles သည်အရွယ်အစား ၃ မျိုးရှိသည်။
The Standard Poodle ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၅ လက်မကျော် (၃၈ စင်တီမီတာ) အမြင့်ရှိပြီးအလေးချိန် ၅၅ ပေါင် (၂၅ ကီလိုဂရမ်) အထိရှိနိုင်သည် သေးသေးလေး ဗားရှင်းသည် ၁၀ လက်မမှ ၁၅ လက်မ (၂၅ မှ ၃၈ စင်တီမီတာ) နှင့် ၁၂ မှ ၁၅ ပေါင် (၅ မှ ၇ ကီလိုဂရမ်) အကြားရှိနိုင်ပါသည်။
အသေးဆုံး Poodle အမျိုးမျိုး၊ Toy Poodle အမြင့် ၁၀ လက်မ (၂၅ စင်တီမီတာ) အောက်ရှိပြီးအလေးချိန် ၅ ပေါင်မှ ၁၀ ပေါင် (၂ မှ ၄ ကီလိုဂရမ်) သာရှိသည်။
Bernese Mountain Poo သည်အပြန်အလှန်ဖောက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ပေါက်ဖွားသောမိဘများနှင့်မတူဘဲအမေရိကန် Kennel Club (AKC) ကအသိအမှတ်မပြုပါ။
သို့သော်အောက်ပါမှတ်ပုံတင်ဌာနများသည် Berner-Poodle Mix ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
နိုင်ငံတကာဒီဇိုင်နာ Canine Registry
သင်တစ် ဦး စပ်ခွေးကိုရယူချင်လျှင်, crossbreeds နှစ်ခုအဘယ်သူမျှမတူညီတဲ့ကြည့်ဖို့သွားကြသည်ကိုသတိရပါ။ သူတို့၏စိတ်ထားနှင့်လည်းအလားတူဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖြေဆိုနိုင်သည့်မေးခွန်းတစ်ခုမှာ“ Bernedoodles ဘယ်လောက်များများလဲ” ဖြစ်သည်။
Poodle မှာအရွယ်အစား ၃ မျိုးနဲ့ Bernesepoo မှာသုံးပါတယ်။ ဤ hybrids များသည် Toy, Miniature နှင့် Standard အရွယ်အစားရှိနိုင်သည်။
ပွဲတစ်ပွဲကတော့မျိုးကွဲများ၏ cutest သည် အလွန်သေးငယ်သောသို့မဟုတ် Toy ဗားရှင်း ၁၀ မှ ၁၇ လက်မအမြင့် (၂၅ မှ ၄၃ စင်တီမီတာ) ရှိပြီး ၁၀ မှ ၂၄ ပေါင် (၅ မှ ၁၁ ကီလိုဂရမ်) လေးသည်။
ကစားစရာ Bernedoodle ( အရင်းအမြစ် )
The သေးသေးလေး Bernedoodle ၁၈ မှ ၂၂ လက်မအမြင့် (၄၆ မှ ၅၆ ကီလိုဂရမ်) ရှိပြီးအလေးချိန် ၂၅ မှ ၄၉ ပေါင် (၁၁ မှ ၂၂ ကီလိုဂရမ်) ရှိပြီး စံအရွယ်အစား ၂၃ မှ ၂၉ လက်မ (၅၈ မှ ၇၄ စင်တီမီတာ) ရှိပြီးအလေးချိန် ၇၀ မှ ၉၀ ပေါင် (၃၂ မှ ၄၁ ကီလိုဂရမ်) အထိရှိသည်။
သူတို့ရဲ့အင်္ကျီနဲ့အရောင်ကောဘယ်လိုလဲ။ ကောင်းပြီ, ထိုခွေးများကိုမကြာခဏအဖြစ်ရည်ညွှန်းရတဲ့အကြောင်းရင်းပါပဲ ဝက်ဝံ။
Bernepoos အများစုမှာaလှိုင်းသို့မဟုတ် curly ကုတ်အင်္ကျီ ၎င်းသည်အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်နှင့်အညိုရောင်တို့၏အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသောအရောင်မျိုးစုံရှိသည်။
Bernese Mountain Dog ကိုယူပြီးနောက် Bernedoodles ၏အင်္ကျီများလေ့ရှိပါတယ် ဆံပင်ဖြောင့်၊ ။
ကောင်းမွန်စွာရပ်တည်ထားသော Bernesedoodles သည် Poodle နှင့် Bernese Mountain Dog တို့၏အကောင်းဆုံးစရိုက်လက္ခဏာများစွာကိုရရှိသည်။
ဤအ hybrids ဖြစ်ကြသည် ချစ်ခင်ခြင်းနှင့်အပျော်အပျက် ၎င်းသည်မိသားစုများအတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ကလေးများအတွက်ကစားဖော်ကောင်းများဖြစ်သည်။ မိသားစုဝင်အားလုံးနှင့်အတူတူနေလိုကြသည်။
သို့သော်သင်ရရှိလိုသော Bernese Mountain Dog-Poodle ရောနှောမှုပမာဏကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
သင်သည်ကစားစရာတစ်ခု (သို့) Mini Bernedoodle ကိုလိုချင်လျှင်သင်၏ကလေးများမည်သို့ဖြစ်ရမည်ကိုသင်သေချာအောင်ပြုလုပ်ရမည် နူးညံ့သိမ်မွေ့ သေးငယ်သောခွေးများကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်သူတို့အလွယ်တကူဒဏ်ရာရနိုင်သည်။
Standard Bernedoodle သည်ကစားချိန်အတွင်းကလေးကိုမတော်တဆခေါက်နိုင်သည်။ သင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ် ကြီးကြပ်သည် သင့်ကလေးများနှင့်ခွေးအတူတူကစားသောအခါ။
ဤပေါင်းစပ်မျိုးပွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားကြီးကျယ်သောအရာတစ်ခုမှာအခြားခွေးများနှင့်လည်းအဆင်ပြေသည်။
သင်သည်သင်၏ Bernedoodle ခွေးကလေးအနည်းငယ်ဖွင့်ကြောင်းကိုသတိပြုမိလျှင်အံ့အားသင့်စရာမရှိပါ ခေါင်းမာသည် မင်းသူ့ကိုအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါ သူသည်၎င်းအား Bernese Mountain Dog မှအမွေဆက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီးထိုစရိုက်လက္ခဏာသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုနှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားသည်။
သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားပေါ်မူတည်။ Bernepoos ရှိနိုင်ပါသည် မြင့်မားသောစွမ်းအင်အဆင့်မှအလယ်အလတ် ။
သငျသညျလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်တောင်တက်အပေါ်သင့်ရဲ့အဖော်ဖြစ်ဖို့ခွေးတစ်ကောင်ရှာနေလျှင်, Bernedoodle တက်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်!
Poodle လိုပဲသူတို့ဟာတက်ကြွပြီးကောင်းမွန်စွာနေထိုင်တတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြတယ် အလုပ်များသောအိမ်ထောင်စုများ ။ သူတို့ကဆွဲယူခြင်းနှင့်ဘဏ္huntာအမဲလိုက်ခြင်းကဲ့သို့ပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများတက်သည်အမြဲပါပဲ။
Bernesedoodles, အထူးသဖြင့် Standard အရွယ်အစား၊ ခြံစည်းရိုးနောက်ခံခြံများရှိအိမ်များကိုသူတို့နေရာပေးရန်လိုအပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် ပြေးပြီးစူးစမ်းပါ ။
ဒီစပ်ရဲ့အရွယ်အစားမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းသူတို့ကိုပေးသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ သူတို့ကအဖျက်သဘောထားတွေကိုရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်။
သတိမပြုရန် အလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ခန်း သူတို့နေဆဲခွေးပေါက်စနေစဉ်သူတို့ကို။ အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သင့်ခွေးသည်စောင့်ပါ နှစ်နှစ် သူတို့နှင့်အတူမည်သည့်တိကျခိုင်မာစွာလှုပ်ရှားမှုများမလုပ်ဆောင်မီ။
သူတို့ပျော်မွေ့ခဲ့သည့်ပင်ပန်းသည့်နေ့တစ်နေ့ပြီးနောက် Bernese Mountain Poo သည်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည် cuddle ဖို့ကိုချစ် သငျသညျအိမ်တွင်းအချို့လျှော့ပေါ့အချိန်ခံစားအဖြစ်တက်သို့မဟုတ်ပင်အနားမှာနေဖို့။
၎င်း၏မိဘတစ် ဦး သည် Poodle ဖြစ်သောကြောင့် Bernedoodle သည်လေ့ကျင့်ရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လိမ့်မည်။ ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲမဟုတ်ပါဘူး။
အခြားမိဘသည်၎င်း၏ခေါင်းမာခြင်းကြောင့်ကျော်ကြားသော Bernese Mountain Dog ဖြစ်သည်ကိုမမေ့ပါနှင့်။ အဆိုပါ Bernepoo ရဲ့သာ၎င်း၏မှတဆင့်ကြာရှည်၏ခေါင်းမာသောကြောင့်သင်တို့မူကား, သင်စိတ်ဓာတ်မသွားပါစေသင့်ပါတယ် ခွေးကလေးဇာတ်စင် ။
သည်းခံခြင်း လေ့ကျင့်ရေး ဤခွေးများသည်သင်သွားနေသရွေ့ skittish Bernese Mountain Poo နှင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အရာဝတ္ထုများကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ယူပါ။ လူမှုရေးနှင့်စတင်ပါ၊ သင်၏ခွေးကလေးအား leash နှင့်လမ်းလျှောက်ရန်သင်ကြားပေးခြင်း၊ potty လေ့ကျင့်ရေး ။ များများသုံးပါ အပြုသဘောအားဖြည့် , ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ရယူထားသော၏ပုံစံ။
သင်၏ Bernedoodle က၎င်းကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတာနဲ့သူသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောလှုပ်ရှားမှုများသို့တက်လှမ်းနိုင်သည်။ သူ့ကိုလှည့်ကွက်များလုပ်ရန်သင်သင်ပေးနိုင်သည် သွက်လက်ဘို့သူ့ကိုလေ့ကျင့် ။ သွက်လက်လေ့ကျင့်ရေးဒီ crossbreed ရဲ့စွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်မှတဆင့်လောင်ကျွမ်းရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပိုင်ရှင်များအတွက်လျင်မြန်စွာလေ့ကျင့်မှုအချက်အလက်များ
သင်၏ Bernesepoo သည်ခွေးကလေးဖြစ်နေစဉ်လေ့ကျင့်မှုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ သူနေဆဲကြောင်းချစ်စရာနည်းနည်း pooch င်နေချိန်မှာသင့်ရဲ့ခွေးအဘို့လမ်းကြောင်းမှန်သတ်မှတ်ထား သင်ယူရန်စပ်စုနှင့်စိတ်အားထက်သန် ။
သင်လည်းလိုချင်ကောင်းလိုလိမ့်မည် သေတ္တာရထား သင့်ရဲ့ခွေးတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး။ Crate လေ့ကျင့်မှုက Bernedoodle ၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျှော့ချရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သေတ္တာကိုသူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုသင်ပေးပါ ဘေးကင်းလုံခြုံအာကာသ သငျသညျအိမျမှထွက်ခွာရန်ရှိသည်အခါတိုင်း။ သင်၏ Bernepoo သည်နောက်ဆုံးတွင်သင်အိမ်၌မရှိသည့်တိုင်ပိုမိုတည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနေထိုင်ရန်သင်ယူလိမ့်မည်။
Bernese Mountain Dog-Poodle ရောစပ်မှုသည်အခြားမျိုးကွဲများ၊ အထူးသဖြင့်၎င်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ် ပို၍ အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည် ထူသောအင်္ကျီ နှင့်အလားအလာရှိသောကျန်းမာရေးပြproblemsနာများ။
တစ် ဦး Bernedoodle သတို့သားဖို့ဘယ်လို
သင် Bernepoo သားမွေးရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းသိသလား အဲဒီအစားရှိပါတယ် ဆံပင် ။ ဆံပင် ထိတွေ့မှုမှချောချောမွေ့မွေ့ရှိပြီးသားမွေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုကောင်းမွန်သော texture ရှိသည်။
၎င်း၏ဆံပင်သည်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းနေသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ Bernese Mountain Poo ၏ဆံပင်ကိုဖြန်းပါ တစ်ပါတ်2မှ3ကြိမ် ။ မကြာခဏသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည်သင့်ခွေး၏ဆံပင်ကောက်ကောက်များ၌ပိတ်မိနေနိုင်သောအသေကောင်များ၏ဆံပင်ကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။
အခွားသောပိုင်ရှင်များသည်၎င်းတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူအနှောင်အဖွဲ့တစ်ခုအခွင့်အလမ်းအဖြစ်ဖြီးလိမ်းခြင်းယူပြီး, နေ့စဉ်၎င်းတို့၏ခွေးရဲ့ဆံပင်တိုက်။ သင်၏ Bernesedoodle သည်အပိုအာရုံစိုက်မှုကိုနှစ်သက်မည်မှာသေချာသည်။
သင်၏ခွေးသည်အသက် ၇ လမှ ၉ လအရွယ်တွင်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းသည်အင်္ကျီကိုရရှိရန်သူ့ကို ၈ ပတ်မှ ၁၂ ပတ်တိုင်းတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ထံခေါ်သွားနိုင်သည်။ ကလစ် ။
(သင်သည်သင်၏ Bernese-Poodle လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုသတို့သားအဖြစ်သို့ယူဆောင်သွားပါကသင်၏ခွေး၏အင်္ကျီကိုမည်သို့ဖြတ်ချင်သည်ကိုတိကျစွာဖော်ပြပါ။
သငျသညျက၎င်း၏ကုတ်အင်္ကျီကနေသဘာဝအဆီဖယ်ရှားပစ်ရန်မလိုချင်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့ Bernese Mountain Dog-Poodle ရောနှောမကြာခဏလည်းရေချိုးမထားပါနဲ့။ သင်လုပ်နိုင်သည် အဝတ်လျှော် သင့်ရဲ့ခွေးလစဉ်လတိုင်း သို့မဟုတ်ဒါသို့မဟုတ်အခါလိုအပ်သော။
Bernedoodles hypoallergenic လား?
အမှန်တရားကတော့ဘယ်ခွေးမှမ hypoallergenic မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် Bernepoo သားမွေးအစားဆံပင်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုသင့်ရဲ့ခွေးကိုဆိုလိုသည် ဓာတ်မတည်ဖြစ်ပေါ်လျော့နည်းဖွယ်ရှိ ။
ကောက်ကောက်ဆံပင်နှင့်အတူ Bernedoodles မှပေါ်လာပါလိမ့်မယ် လျော့နည်းသွန်း ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဆံပင်တွေဟာပတ် ၀ န်းကျင်ထဲကိုမျောသွားမယ့်အစားသူတို့ရဲ့ဆံပင်တွေမှာပိတ်မိနေလို့ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာလေထုထဲတွင်ပိုမိုပျံ့နှံ့မှုနည်းပြီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဓါတ်မတည့်မှုနည်းပါးသည်။
သငျသညျသူ၏မျက်နှာအာရုံစိုက်ဖို့မေ့လျော့လျှင်ရှုပ်ထွေး - အခမဲ့, လတ်ဆတ်အနံ့အင်္ကျီနှင့်အတူ, သင့်ခွေးကိုကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားမဟုတ်ပါဘူး။
မျက်ရည်အလွန်အကျွံထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် Bernesedoodle ၏တောက်ပသောမျက်လုံးများနှင့်စတင်ကြပါစို့ အစွန်းအထင်း ခွေးရဲ့သားမွေးထဲမှာ။
ရေအနည်းငယ်နှင့်ဆေးကြောပါ ညင်ညင်သာသာသုတ် သင့်ရဲ့မွေးမွေးကလေး၏မျက်စိပတ်လည်သားမွေးကနေမဆို gunk ကွာ။
မျက်စိcarefullyရိယာကိုဂရုတစိုက်သန့်ရှင်းနေစဉ်သင့်ခွေး၏မျက်လုံးများကိုစစ်ဆေးပါ နီခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းခြင်း သို့မဟုတ်ပင်ပုံမှန်မဟုတ်သောဥတု။ ဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုဘယ်တော့မှမသုံးပါနှင့်၊ ဤအရာသည်သင့်ခွေး၏မျက်လုံးများကိုအဆင်မပြေဖြစ်စေနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ Bernese Mountain Dog-Poodle ရောစပ်မှုတွင်ဆံပင်ရှည်ရှိပါကမျက်လုံးယားယံခြင်းကိုကာကွယ်ရန်သူတို့၏ဆံပင်ကိုသူတို့မျက်နှာပေါ်မှညှပ်ထားပါ။
ဘေးဖယ်သူတို့၏မျက်စိမှဤခွေး '' နားရွက်လည်းအချို့သောအထူးအာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Bernedoodle ရဲ့နားရွက်၌ဆံပင်ပေါင်းသူတို့ရဲ့ကျဆင်းသွားအနေအထား, သင့်လျော်သောလေကြောင်းလည်ပတ်မှုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်၏စုဆောင်းခြင်းအားပေး ဖုန်နှင့်အစိုဓာတ် ။
၎င်းသည် Bernesepoo ၏နားကိုရောဂါကူးစက်စေပြီးနားနှင့်ပေါက်သောခွေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမှန်ကန်စေသည်။
သင့်ရဲ့ခွေးနားရွက်တွေကိုအပတ်စဉ်စစ်ဆေးပြီးသူတို့ကိုသန့်ရှင်းပါ ဝါဂွမ်းဘောလုံးနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ။ သင့်ရဲ့ခွေးနားရွက်ကိုအသုံးမပြုခင်ချည်ဘောလုံးမှပိုလျှံသောအရည်ကိုဖယ်ရှားရန်မမေ့ပါနှင့်
ဖယောင်းထူထူထူ၊ ပုပ်နေသောအနံ့နှင့်စသည်တို့ကိုသတိပြုပါ နီခြင်းနှင့်ယားယံအရေပြား သင့်ရဲ့ခွေးရဲ့နားရွက်ပတ်ပတ်လည်။ သူသည်နားကိုမကြာခဏခြစ်မိလျှင်သို့မဟုတ်ခေါင်းခါလိုက်လျှင်သူ့ကိုဆေးစစ်ရန်ဆေးခန်းသို့ခေါ်သွားပါ။
သင့်ရဲ့ Bernedoodle အစာကျွေးဖို့ဘာ
Bernese Mountain Dog Poodle ရောနှောခြင်းအတွက်မှန်ကန်သောအစားအစာဖြစ်လိမ့်မည် အလွန်အမင်းတစ် ဦး ချင်းစီ ။
Bernedoodle ခွေးတွေကိုကျွေးသင့်တယ် အရည်အသွေးမြင့်ခွေးကလေး kibble အထူးသူတို့ရဲ့အရွယ်အစားနှင့်အာဟာရလိုအပ်ချက်များအတွက်ရေးဆွဲ။
သင်ရွေးချယ်သောခွေးစာသည် Bernese-Poodle ၏နေ့စဉ်အာဟာရလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသေချာပါစေ။
ပရိုတိန်း စဉ်ခွေးရဲ့တစ်သျှူးနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထိန်းညှိကူညီပေးသည် အဆီ သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြသည်။
သူတို့စားသင့်တဲ့အစားအစာပမာဏအရ၊ သူတို့ရဲ့အရွယ်အစား၊ အသက်နဲ့လှုပ်ရှားမှုအဆင့်တွေကိုအခြေခံပြီးလုပ်ရမယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် Bernesedoodle လိုသည် 1,500 ကယ်လိုရီ နေ့စဉ် (kibble ခွက် ၃ ခွက်) ။
စံ Bernedoodle - ၁၄၀၀ မှ ၁၈၀၀ ကယ်လိုရီ
သေးငယ်တဲ့ Bernedoodle - ၇၅၀ မှ ၁၄၀၀ ကယ်လိုရီ
အလွန်သေးငယ်သော Bernedoodle - ၄၀၀ မှ ၉၆၀ ကယ်လိုရီ
Pups များသည်အနည်းဆုံးအစာစားသင့်သည် တစ်နေ့လျှင်4ကြိမ် သင့်ရဲ့ Bernedoodle ကြီးထွားလာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တစ်နေ့လျှင်2အစားအစာကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ Bernepoo ပေးခြင်းအားဖြင့်ဖောင်းအန္တရာယ်လျှော့ချ သေးငယ်ပေမယ့်မကြာခဏအစားအစာများ ။ သင်ဆုံးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ခွေးကိုအစာကျွေး kibble မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမဆို၊
Standard Bernese Mountain Poos ၏အစားအစာစားသုံးမှုကိုသူတို့ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ပိုမို၍ တင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးသင့်သည် စားစရာ ။ နေ့စဉ်အစားအသောက်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်းသည်ဤခွေးများကိုကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းထားရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ရောနှောထားသောဝတ်ရည်ယေဘုယျအားဖြင့်သောကြောင့်ကျန်းမာဖြစ်ကြသည် မျိုးစပ်သန်စွမ်း ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ခွေးတစ်ကောင်မိဘများခံစားနေရသောကျန်းမာရေးပြinheritနာများကိုသူတို့အမွေခံရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
Bernese Mountain Dogs ၏တင်ပါးဆုံရိုးနှင့်တံတောင်ဆစ် dysplasia, နှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်အတူခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ဖောက်လည်းခွေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံး ။
၎င်းသည်သန်စွမ်းသောသွားလာနေသော်လည်း Poodle တွင်ပါဝင်သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြissuesနာများရှိနိုင်သည် မျက်လုံး၊ အရေပြားနှင့်အစာခြေအခြေအနေများ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့ရောဂါများ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပြproblemsနာတွေကြောင့် Bernedoodles ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတယ် တင်ပါးဆုံရိုး dysplasia , မျက်စိပြproblemsနာများ နှင့် အရေပြားပြissuesနာများ ။
သင်၏ခွေးတစ်ကောင်သည်ပုံမှန်ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောအစားအစာများပေးခြင်းဖြင့်အရေပြားဓာတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင်အနည်းဆုံးလုပ်နိုင်သည်။ သူ့ကိုတစ် ဦး ပေးခြင်းကြိုးစားပါ ဘောဇဉ် - အခမဲ့အစားအစာ , အစေ့ဘုံအစားအစာဓာတ်မတည်အစပျိုးဖြစ်ကြသည်အဖြစ်။
သင်တစ် ဦး မွေးမြူရေးမှတစ် ဦး Bernedoodle ခွေးကလေးကိုရဖို့ရှာနေလျှင်, အောက်ပါအခြေအနေများအတွက်စမ်းသပ်မှုအကြောင်းကိုလည်းမေး
သူတို့ကောင်းစွာဂရုစိုက်ခံရလျှင် Bernedoodle ၏ပျမ်းမျှသက်တမ်းသည်အကြားဖြစ်သည်7မှ 18 နှစ် ။
ဤရွေ့ကားခွေး '' သက်တမ်းလည်းသူတို့ရဲ့အရွယ်အစားကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။ Tiny နှင့် Mini Bernedoodles တို့သည် Standard အရွယ် Bernedoodle ၏သက်တမ်းတိုတောင်းသောကြောင့်အသက်ရှည်ကြသည်။
သင်ဤအပိုင်းကိုသင်ရောက်နေပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါက Bernesedoodle သည်သင့်မိသားစုအတွက်မှန်ကန်သော furry ကလေးဖြစ်သည်ဟုသင်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ခွေးတစ်ကောင်ကိုမျိုးပွားသူတစ်ယောက်က ၀ ယ်ချင်လား (သို့) Bernese Mountain Dog-Poodle အဟောင်းကိုပိုနှစ်သက်ချင်ပါသလား။
မွေးမြူသူများနှင့်အတူသွားခြင်းသည် ပို၍ စျေးကြီးပြီး၊ Bernedoodle ခွေးကလေးသည်မည်သည့်နေရာမှမဆိုကုန်ကျသည် $ 1500 မှ $ 5000 တစ်ခုချင်းစီကို။
စျေးနှုန်းဟာ Bernepoo ရဲ့အရွယ်အစားနှင့်ခြုံငုံအသွင်အပြင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်, အချို့မျိုးဆက်များသည်ဥပမာအားဖြင့်တိကျသောကုတ်အင်္ကျီအရောင်များအတွက်ပိုမိုကောက်ခံသည်။
မှန်ကန်သော Bernedoodle မျိုးဆက်များကိုရှာပါ
ထွက်ရှိအကောင်းဆုံးမျိုးဆက်များသူတွေကိုရှိပါတယ် ပိုင်ရှင်များအတွက်ခွေးကလေးကိုရွေးပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားတွေအများကြီးအကောင့်သို့ယူရှိပါတယ်အဖြစ်နှင့်အခြားလမ်းန်းကျင်။
ပိုင်ရှင်လောင်းတွင်ဓာတ်မတည့်ပါကဥပမာအားဖြင့်မျိုးပွားသူသည် Bernese Mountain Poo ခွေးကလေးအားဆံပင်နည်းသောပတ် ၀ န်းကျင်သို့လွှတ်ပေးရန်အကြံပေးလိမ့်မည်။
ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့ပြီးပြည့်စုံသောကမ္ဘာတွင်မနေထိုင်ကြဘူး, နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ Bernedoodle မျိုးဆက်များ ရှာတွေ့ဖို့စိန်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
သူသည်သင့်ကိုသင်မ ၀ ယ်ခင်အမှိုက်သရိုက်များ၏မိဘများနှင့်ခွေးပေါက်စနှင့်တွေ့ဆုံရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။
ခွေးကလေးကြီးထွားလာမည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သင်ခွေးတစ်ကောင်၊ သင်၏နေထိုင်မှုပုံစံ၊ မိသားစုနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တို့တွင်သူကသင့်အားမေးသည်။
သင်က Bernedoodle ခွေးကလေးကို ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်မဖြစ်စစ်ဆေးရန်သင့်အားအကြံပြုလိုသောမျိုးဆက်အချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Kimberlee ရဲ့ဥယျာဉ် (အိုင်အိုဝါ)
HC Bernedoodles (မစ်ဆူရီ)
Alpine Bernedoodles (ကော်လိုရာဒို)
လူများနှင့်သူတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအကြားရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာပုံပြင်များသည်မွေးစားခြင်းမှစတင်သည်။ အမိုးအကာများသို့မဟုတ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များတွင် Bernepoo ကိုရှာရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဤ hybrids များသည်လည်းပေါ်ထွက်လာနိုင်သည် ဖောက် - တိကျတဲ့အမိုးအကာ Poodles နှင့် Bernese Mountain Dog တို့အတွက်ဖြစ်သည်။
မွေးစားခြင်းအတွက် Bernesedoodles ရရှိနိုင်လားဆိုတာကိုအောက်ပါအဖွဲ့များနှင့်သင်စစ်ဆေးနိူင်သည်။
Swissridge ခွေးဂေဟာ (အွန်တိုရီယို၊ အေဒီ)
အနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်း Bernedoodles (အီလီနွိုက်စ်)
သင်ကစားစရာတစ်ခု၊ Mini တစ်ခု၊ သို့မဟုတ် Standard Bernese Mountain Dog-Poodle ရောစပ်မှုပုံစံကိုရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ သူသည်သူမသို့မဟုတ်မည်သည့်မိသားစုသို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုစုံလင်သောဖြည့်စွက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
သူတို့ရဲ့ကြောင့်ဖြစ်သည် အနိမ့်သွန်းလောင်းအင်္ကျီ , မတည့်သူတွေကိုတောင်ဒီသက်ရှိဝက်ဝံကြီးများကိုပိုင်ဆိုင်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်!
Bernepoos ဖြစ်ကြောင်းဆံပင်ကောက်ကောက်၏အစုအဝေးဖြစ်ကြသည် ပေးရချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်ဝ၏။
ဒီခွေးတွေမှာရှိတယ် လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်အလယ်အလတ်လိုအပ်ချက် , ဒါကြောင့်သူတို့တစ်တွေအလွန်အမင်းတက်ကြွပိုင်ရှင်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Bernedoodles ကိုမင်းဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာငါတို့ကိုအသိပေးပါ။ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက် box ထဲမှာထင်မြင်ချက်များအတွက်, ဒါမှမဟုတ်ပိုင်ရှင်အသစ်များအတွက်အကြံပေးချက်များကိုရိုက်ထည့်ပါ။
Red Golden Retriever အကြောင်းသင်သိထားသင့်သည့်အချက်အလက်များ
White German Shepherd: ဖြူဖွေးဖြူဖြူသိုးထိန်းတွေအတွက်ပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်
shih tzu/chihuahua ရောနှော
pug နှင့် beagle ကြားဖြတ်ကူးပါ
alaskan husky ခွေးပေါက်လေးများပုံများ